विप्लव मित्र शक्ति : बैध्य – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ विप्लव मित्र शक्ति : बैध्य
विप्लव मित्र शक्ति : बैध्य
अनलाइन नुवाकोट माघ १३ २०७४, शनिबार ०८:१७
»» जनयुद्ध तपाईंंहरूले जस्तो खालको अवधाराणा बनाउनुभएको थियो, जनयुद्धको विकाससँगै यहीँ पुगिन्छ भन्ने त पक्कै होइन होला रु त्यस समयमा पनि प्रचण्ड नै प्रमुख नेता थिए । जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डरसम्म बन्न पुगेका अहिले प्रचण्ड जहाँ पुगे, त्यसको पछाडि मख्य कारण के होला ?
चुनावी परिणामको कुरा गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनता कांग्रेसबाट पनि सन्तुस्ट होइन, अरू राप्रपाहरूबाट पनि सन्तुस्ट होइन । एउटा परिवर्तन जनताले परिवर्तन चाहाने र अहिले जुन वाम–गठबन्धन बन्यो, वाम–गठबन्धन बनिसकेपछि जनतामा के पर्‍यो भने बरु वाम नै हो भन्ने पर्‍यो अथवा जनता भ्रमित भए । जनताले अर्को विकल्प जनताले त्यस्तो देखेनन् । त्यसकारण मत वाम–गठबन्धनको पक्षमा गयो । गए पनि जनताले एउटा कम्युनिस्ट भनेर मत हालेका हुन् । त्यसकारण जनतालाई हामी नकरात्मक रूपमा हेर्न हुँदैन । र, उनीहरूले अहिले खास परिवेशमा भ्रम दिन सफल भए । अर्को कुरा के हो त्यसको विकल्पको रूपमा जुन वैकल्पिक क्रान्तिकारी शक्ति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो वैकल्पिक शक्ति टुटफुट विभाजन आदिको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेन फेरि १० वर्ष महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा गइसकेपछि हाम्रोमा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब विचित्र छ के जनयुद्धको जुन नेता छ अथवा क्रान्तिको नेता छ र प्रतिक्रान्तिकारीको नेता पनि उही बन्न पुग्यो, यो जनतालाई बुझिसाध्य भएन । यसले गर्दाखेरि जनतामा भ्रम पर्न गयो । यस्तो जटिल परिस्थितिमा त्यतापट्टि जनताले किन मत हाले । यो वाम बनेर होइन वा वाम–गठबन्धन होइन । यो एउटा घोर दक्षिणपन्थी–असवसरवादी गठबन्धन हो । यो प्रतिगमनमा गइसकेको छ । बजारको दृष्टिकोणले हेरे पनि विचारको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि अब कांग्रेस र यिनीहरूमा फरक के छ ? संसदीय व्यवस्था साथ दियो भने त्यही हो । साथ पनि त्यही हो गन्तव्य पनि त्यही हो । समाजवाद भनेर भन्छन्, अब समाजवाद त त्यही संविधानमा लेखेको छ भन्छन् । समाजवादका त के विभिन्न परिभाषा छन् । कम्युनिस्ट घोेषणापत्र पढ्ने हो भने त समाजवाद त प्रतिक्रियावादी समाजवाद पनि हुन्छ भनेर माक्र्सले भनेकै कुरा होे । वैज्ञानिक समाजवाद होइन भनेर भन्नु त्यो त समाजवाद कांग्रेसले पनि भनिररहेकै छ । मात्रमा परक कुरा हो अलि–अलि मात्रामा परक हुन्छन् तर गुणमा के हो भने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र प्रतिक्रिायावादी विचारधारा यी सबैको संरक्षण गर्ने थलोका रूपमा नेपाली कांग्रेस र अहिलेको वामभित्रका केही छैनन् । विचित्र कुरा के भन्नुहुन्छ भने एउटा कम्युनिस्ट भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्छौं भन्ने बहुलवाद पनि स्वीकार गर्ने एमाले त थियो नै । त्यसको प्रचण्डजी र हामीसँगै विरोध गरेकै हो । उनीहरूलाई थाहा नभएको कुरा त होइन । सब परिघटना थाहा भईभई बुझीबुझी एउटा वर्गीय रूपमा पनि राष्ट्रिय रूपमा पनि हरेक दृष्टिकोणले पनि यो आत्मसमर्पणको कुराहरू होे । योे कुनै गठबन्धन नै होइन ।
यिनीहरूको जुन वाम–गठबन्धन बनेको छ, त्यसले जनतालाई भ्रमित पारेको छ । यो क्रान्तिकारीहरूलाई चुनौती त हो किनभने कम्युनिस्टको नाममा बदमासी गरिराख्या’छन्, जनतालाई झुक्याइराख्या’छन् तर पनि जुन विकास, समृद्धि र स्थीरता आशा जनतामा बाँडेका छन्, त्योे वाहियात हो । जुन सक्दैनन् जुन खालको सम्भव छैन । उनीहरूले विकास गर्नका निम्ति त नोकरशाही पुँजीपति, दलाल पुँजीवादको विरुद्ध नै लड्नुपर्‍यो, एउटा नवउदारवादको विरुद्ध नै लड्नुपर्‍यो । यहाँ वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूसँग गरिएका थुपै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्‍यो, जनजीविकाको प्रश्नप्रति जनताको जनतन्त्रप्रति एउटा सकरात्मक बाढी जानुपर्‍यो, त्योे सम्भव छैन । त्यसकारण उनीहरूले जनताको समस्या हल गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको बीचमा फेरि अन्तर्विरोधहरू चर्किंदै जान्छ ।
सत्ताधारीवर्गका बीचमा नेपालमा लामो समयदेखि एउटा अन्तर्विरोध भइराखेको छ । उनीहरू पनि एक–आपसमा लडिराखेका छन् । त यिनीहरू लड्दै आएका छन् । अहिले पनि लड्छन्, भोलि पनि लड्छन् । क्रान्तिकारीहरूका लागि मैदान खालि हुन्छ । यो स्थितिमा क्रान्तिकारीहरूले वैचारिक रूपमा, सांगठनिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा सुदृढ हुँदै फेरि एउटा क्रान्तिको निम्ति एउटा आधार तयार पार्ने गर्नुपर्छ । छोटोमा भन्नुपर्दा नयाँ जनवादी सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादीतिर जाने एउटा प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । वैचारिक–राजनीतिक रूपमा यही भइहाल्यो । सांगठनिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्नुस् । अब यो वाम गठबन्धनले धेरै भ्रम दिइराखेको छ । यी दक्षिणपन्थी अवसरवादी हुन् । यी एउटा अर्को कित्तातिर गइसके । क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसकारणले हाम्रो प्रयास हाम्रो पार्टीको तर्फबाट लामो समयदेखि एउटा प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ । भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भयो र हामीले नजिकका फोर्सहरू खास गरी नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा जान चाहने माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मान्ने राख्ने शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने दिशातिर जानुपर्छ । संगठनलाई बलियो बनाएर फेरि क्रान्तिको तयारीको दिशातिर दृढतापूर्व लाग्नुपर्छ । सानो–तिनो विषय जनताको तत्कालीन जनजीविका प्रश्नहरू, राष्ट्रियताको प्रश्नहरूलाई लिएर पनि जे–जस्तो सकिन्छ, संघर्षको विकास गर्दै ठूलो संघर्षको विकासको आधार तयार पार्दै जानुपर्छ ।
»» वामको एमाले र माओवादी केन्द्र दुई पार्टी एकता गर्दैछन् भन्ने छ अथवा के हुन्छ थाहा छैन, त्यो भन्न सकिन्न होला । यतातिर तपाईंहरूले अघि भन्नुभएजस्तै सञ्चार–माध्यममा पनि आइरा’छ र पहल पनि भइराखेको छ भन्ने छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मान्ने नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भन्नुभयो । अहिलेको परिवेशमा त्यसका आधारहरू के–के हुन र को–कोसँग सम्भावना छ रु नेपालमा भएको वामपन्थी शक्तिहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको कुन–कुनसँग एकताको सम्भावना छ ?
सञ्चार–माध्यमबाट भन्नुपर्दा दक्षिणपन्थी अवसरवाद वाम–गठबन्धनका रूपमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको संरक्षणको गर्ने प्रतिक्रियावादी दिशातर्फ गइराखेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनको विरुद्ध एउटा विचारात्मक संघर्ष चलाउने कुरा भइहाल्यो । यो सरकारमा जाँदैछ । हामीले संघर्ष गरुन्जेल दमन त भइहाल्छ । त्यसको हामीले संयुक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू गोलबन्द हुनैपर्छ । यसको विकल्प छैन । सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । अलिकति सानो भइयो, कमजोर भयो भन्ने खालको मानिसहरूमा अलिकति निरासा पनि आउने गर्छ । र, हामी त्यो निरासाकोे पक्षमा छैनौँ । सानो र कमजोर भाका इतिहासमा धेरै थिए । हेर्नुस्, हामीले त्यस्ता क्षणहरू भोग्दै आएका पनि छौँ । क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्दै र एकताबद्ध हुँदै अब फेरि अर्को क्रान्तिको तयारी गर्ने हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादको दिशामा दृढतापूर्वक जाने हो । मूल कुरा यही हो । यसका निम्ति यहाँहरूको सञ्चार–माध्यमले क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्ने दिशातिर सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्धतिर महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस्, हामी यहाँहरूबाट यही आशा र अपेक्षा गर्छौँ । स्रोत : रातो खबर